Mareykanka oo faah faahiyay duqeymihi ugu dambeeyey ee Al Shabaab lagu beegsaday – Radio Muqdisho
Mareykanka oo faah faahiyay duqeymihi ugu dambeeyey ee Al Shabaab lagu beegsaday
War qoraal ah oo laga soo saarey xarunta taliska Ciidamada Militariga Mareykanka ee Africa u qaabilsan ayaa lagu faah faahiyay in Duqaynta Habeenkii Jimcaha ahaa laga fuliyay Gobolka Jubadda Hoose meel 20 Mile u jirta Magaaladda Caasimadda ah ee Muqdisho lagu beegsaday maleeshiyaad katirsan Shabaab.
Militariga Mareykanka ayaa sheegay in deegaano dhowr ah ay ku duqeeyeen Shabaab sida deegaano katirsan Gobolada Bay iyo Shabeelooyinka iyo Jubada Hoose.
Taliska Mareykanka ee Africa ayaa Warka uu soo saaray ku sheegay in weerarkii uu dambeeyay ay isku xirkiisa la kaashadeen Dowladda Soomaaliya.
Ilaa 81 qof oo katirsan koxda Shabaab ayaa lagu dilay duqeymo ka dhacay Degmada Jilib ee Gobolka Jubada Dhexe,taasi oo ay fuliyeen ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Soomaaliya oo kaashanaya xulufadooda,waxaana dowladda Soomaaliya ays heegtay in weerarkaasi khasaare xooggan uu ka soo gaarey Shabaab.
Weeraradda isadabajooga ah ee Al-shabaab lagu beegsanayo ayaa kordhay Maalmihii u dambeeyay, weerarardaasi waxaa ay kakala dhaceen Goboladda Shabeelaha Hoose, Shabeelaha dhexe Bay, iyo Jubadda dhexe.
Wixii ka dambeeyey 14kii October qarixii ka dhacay isgoyska Soobe ee Magaalaad Muqdisho waxaa sii kordhayay carada laga muujinayo dhibaatada Alshabaab ay u geysanayaan bulshada.
Wasiirka arrimaha Gudaha”Deegaanada Qaar Gole deegaan lagama hirgelinkaro sababo Amni”
20.000 oo dollar oo la duldhigay horjooge Shabaab katirsan oo Kenya kusugan